Sida ugufiican ee loogu socdaalo qaabab badan | Ragga Stylish
Wax badan ayaad ka baran kartaa habka saxda ah ee loo socdo adoo daawanaya bandhigyada moodada.
Qaabka aan u soconno ayaa naga caawin kara inaan sameyno aragti wanaagsan kuwa kale, inkasta oo ay waliba liidato iyadoo kuxiran qaabdhismeedka, tamarta iyo muuqaalka wajiga, waana sababta ay muhiim u tahay in lagu dadaalo sidii loo samayn lahaa sida saxda ah. Waa kuwan furayaasha socodka nabad gelyada iyo qaabka:
Barashada sida ugu fiican ee loo socdo waa wax u baahan jimicsi fara badan, sidaa darteed waa inaad waqti ka haysataa jadwalkaaga toddobaadlaha ah. Inaan socod ku aado magaalada ama baadiyaha waa lama huraan, sidoo kale ku shaqee qaabka jirka oo dhan muraayada horteeda kan weyn ayaa ka sii fiican. In badan oo aan ku tababbarayno labadan dhinac, si dhakhso leh ayay natiijooyinka wanaagsan u imaan doonaan.
Socodka foorarsiga ahi wuxuu ka tarjumayaa nabadgelyo xumo naftiisa. Wadadeena socodka si aan aragti fiican u yeelano, waa inaan garbaha dib u dhignaa, garkayaga xoogaa kor u qaadnaa oo aan u oggolaannaa gacmaheennu inay si xor ah ugu dhacaan dhinacyadeenna, innagoo horay iyo gadaal u soconeyna markaan soconno.
Denzel Washington waa mid ka mid ah jilayaasha ugu casrisan ee socda
Socodka qallafsan wuxuu naga dhigayaa inaan u muuqano mid kalsooni badan, halka socodka qunyar socodka ah ay calaamad u tahay inay wax qaldan yihiin, in nooc ka mid ah welwelka aan ku qabno madaxeenna. Ugu dambeynti, waxay naga dhigeysaa inaan u muuqano inaan la soo dhowaan karin. Marka isku day markasta u soco si deg deg ah oo leh horumar wanaagsan ... go'aan.
Muuqaalka wajigeena sidoo kale wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa in habka aan u soconaa uu sawir fiican ama mid xunba ka bixiyo nafteena. Xidho wejiga dabacsan ama dhoolla caddayn yar (Waa lama huraan inay tahay wax dabiici ah) intaan soconno waa calaamad muujinaysa kalsooni in, marka lagu daro, dadka kale u sheegto inaan heli karno, taas oo ahmiyad weyn u leh cilaaqaadka dadka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Muuqaalka iyo Qaabka - Tilmaamaha Socodka Fiican
Sidee loo badiyaa dharkaaga?
Timaha cirro, xaalad ka faa'iidooyin badan faa'iido darrooyinka